बिहान चाल्नाखेल जंगलमा मृ’त भेटिएका दुबैजना विद्यार्थी, एकजना नुवाकोट र अर्को काभ्रेका ! | Public 24Khabar
Home News बिहान चाल्नाखेल जंगलमा मृ’त भेटिएका दुबैजना विद्यार्थी, एकजना नुवाकोट र अर्को काभ्रेका...
बिहान चाल्नाखेल जंगलमा मृ’त भेटिएका दुबैजना विद्यार्थी, एकजना नुवाकोट र अर्को काभ्रेका !
काठमाडौं– चा’ल्नाखेल जंगलमा मृ’त भेटिएका दुई युवकको प’हिचान खु’लेको छ। मृ’त’कमध्ये एक जना नुवाकोटको छापाका १६ वर्षीय अर्जुन खड्का र अर्का काभ्रेको भु’म्लुका १७ वर्षीय मंगल तामाङ रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी रमेश बस्‍नेतले बताए।
उनीहरु दुवैजना बा’ङ्‍गेमु’ढामा बस्‍ने गरेको पाइएको छ। शुक्रबार जंगलमा भेटिएका दुवै जना विद्यार्थी भएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता (एसपी) रमेश बस्नेतले बताए। मृ’तकका आफन्तले श’वको प’हिचान गरेका हुन्। अर्जुन अ’सनस्थित टेउडा स्कुलमा र मंगल क्षेत्रपाटीस्थित जिपी स्कुलमा कक्षा १० मा पढ्थे।
श’व फेला परेको स्थाननजिकै दुई वटा वि’ष’को ब’ट्टा पनि भेटिएको तर उनीहरुले वि’ष से’व’न ग’रे न’गरेको भने पुष्टि भइनसकेको एसपी बस्नेतले बताए। दुवै श’व पो’स्ट’मा’र्ट’म’का लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ। घ’ट’नास्थलमा अव’लोकनमा गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फ’रे’न्सि’क डाक्टर पु’गेका थिए।
यस्तै ता’लिम प्राप्त कु’कुरलाई पनि अनुसन्धानका लागि लगिएको छ। श’व फेला परेको ख’बरपछि काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहसहितको टोली पनि घ’ट’ना’स्थल पुगेको थियो। प्रहरी अ’प’रा’ध महाशाखा र परिसरको टो’लीले अनुसन्धान था’लेको छ।
Previous articleबाबुलाई भो’कले सु’काए, मा’न्छेको मा*सु खा*नेदेखि मु*टु झि*क्नेसम्मका १५ क्रु’र शा*सक (भिडियो हेर्नुहोस) जानकारीका लागि सेयर गराै
Next articleआफ्नै बुहा’री लाई कि’चि कि’चि मा’र्दिए, ह’त्यारालाई राेडमा लिएर जि’उदै जला’उने चेता’वनी (भिडियो हेर्नुहोस)